Global Voices teny Malagasy » “Te hilaza amin’ny olona izay zava-niainany nandritra ny loza voajanahary izay namely ny tanàna izy ireo.” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Jona 2018 4:25 GMT 1	 · Mpanoratra Andy Arboleda, Alberto Martínez Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Andy Arboleda sy Alberto Martínez dia samy mpikambana ao amin'ny Centro de juventudes de Esmeraldas  (Foiben'ny tanora ao Esmeraldas), fikambanan'ny zon'olombelona ao Esmeraldas, Ekoadoro izay miara-miasa amin'ny ankizy, tanora sy ny vondrom-piarahamonina LGBTI. Iray amin'ireo asany voalohany indrindra ny fandaharana amin'ny radio isan-kerinandro La Calle Habla  (Resaky ny Lalana), sehatra ho an'ny adihevitra sy ny resaka momba ireo olana atrehin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Ny manaraka etoana dia mifototra amin'ny dikan-tsoratry ny antsafa niarahana tamin'i Andy sy Alberto raha nanadihady ny zavon-teny amin'ny voambolana “Esmeraldas,” tanàna niharan'ny horohorontany  sy ny ady manamorona ny sisintany  ifampizarany amin'i Kolombia.
Izy ity dia ao anatin'ny andiany Rising Frames izay niarahana tamin'ny fiarahamiasa amin'ny fikambanana El Churo  ao Quito, Ekoadoro. Nikarakara atrikasa notontosaina tamin'ny 4 mey 2018 tao Esmeraldas, Ekoadaoro izy ireo, izay namory solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa hanadihady ny fomba sy ny lohahevitra tandrovin-dry zareo mba hiseho amin'ny angona fampitam-baovao Ekoadoriana ary hamorona tantara ho setrin'izany fisehoana izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/08/120418/
 ady manamorona ny sisintany: https://www.theguardian.com/world/2018/apr/13/ecuador-colombia-journalists-military-strike-rebels